एक महिनामा ६ जना महिलाको हत्या, १६ जना बलात्कृत |
एक महिनामा ६ जना महिलाको हत्या, १६ जना बलात्कृत
प्रकाशित मिति :2015-11-23 12:16:47
ललितपुर, मंसिर ७ । कात्तिक महिनामा ६ जना महिलाको हत्या भएको छ भने १६ जना किशोरी तथा महिलामाथि बलात्कार भएको छ । सञ्चारिका समूहले कात्तिक महिनामा गरेको १५ वटा राष्ट्रिय दैनिकको अनुगमनका क्रममा ६ वटा हत्याको ६ वटा समाचार र १६ जना महिलामाथि भएको बलात्कारको २३ वटा समाचार सामग्री प्रकाशित भएको जनाएको छ ।
अनुगमनमा खेलकुद र मनोरञ्जनसम्बन्धी समाचारबाहेक दैनिक पत्रिकाका समाचार, विचार तथा सम्पादकीय सामग्री समेटिएको समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राजधानीबाट प्रकाशित कान्तिपुर, नागरिक, नयाँ पत्रिका, गोरखापत्र, हिमालय टाइम्स्, कारोबार, राजधानी, अन्नपूर्ण पोष्ट, नेपाल समाचारपत्र, कमाण्डर पोष्ट, सौर्य दैनिक, नेपाली दैनिक तथा द काठमाण्डु पोष्ट, रिपब्लिका, द हिमालयन टाइम्स, र द राइजिङ नेपाल अंगे्रजी दैनिक अनुगमनमा समेटिएका थिए ।
महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसालाई १३ वटा शीर्षकमा अनुगमन गरिएको थियो, जसमा बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा, दाइजो, मानव बेचविखन, हत्या, बहुविवाह, बोक्सी, परम्परागत तथा धार्मिक हिंसा, आर्थिक, स्वास्थ्यसम्बन्धी, राजनीतिक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्ति अनुसार कात्तिक महिनामा यौन दुव्र्यवहारको एउटा घटना भएको थियो र २ वटा समाचार सामग्री प्रकाशित भएका थिए । स्वास्थ्य अधिकार हनन्का २ वटा घटना थिए र १९ वटा समाचार सामग्री प्रकाशित भएका थिए । आर्थिक अधिकारसँग सम्बन्धित ५ वटा समाचार, विचार तथा सम्पादकीय छापिएका थिए । यस अवधिमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी १० र राजनितिक अधिकार हननसम्बन्धी ३६ समाचार, विचार तथा सम्पादकीय छापिएको थियो । त्यस्तै परम्परागत र धार्मिक हिंसासम्बन्धीे १० वटा समाचार सामग्री प्रकाशित थिए । यो महिना दाईजो, बोक्सी आरोप र बहुबिवाह सम्बन्धि कुनै समाचार सामग्री प्रकाशित भएनन् ।
महिला हिंसासम्बन्धी सबैभन्दा बढी समाचार भित्री पृष्ठमा छापिएको समूहले जनाएको छ । समूहका अनुसार पहिलो पृष्ठमा ९ वटा समाचार छापिएका थिए । पृष्ठ २ मा सबैभन्दा बढी २४ वटा समाचार छापिएका थिए । पाचौं पृष्ठमा २० वटा समाचार छापिएका थिए । महिला हिंसासम्बन्धी समाचारको स्थान सन्तोषजनक थियो ।
सो अवधिमा महिला हिंसासम्बन्धी सम्पादकीय ४, फोटो समाचार १, लेख २७, सफ्ट न्यूज १९ तथा हार्ड न्यूज ७६ प्रकाशित थिए । प्रकाशित समाचारमध्ये हार्ड न्यूज ११, सफ्ट न्यूज ११ र १० वटा लेखमा मात्र फोटो/स्केच प्रयोग गरिएको थियो ।
सञ्चारमाध्यमले महिला हिंसासम्बन्धी समाचारलाई स्थान दिने गरेको सञ्चारिका समूहले जनाएको छ । तर, समाचारको ‘फलोअप’ न्युन पाइएको छ । ‘हार्ड न्यूज’ मा फोटोको प्रयोग कम भएको र समाचार सामग्रीमा पीडित वा पीडक कसको तस्बिर राख्ने भन्नेमा यस अघि झै स्पष्ट नीतिको अभाव देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस महिना पीडितका ४ वटा तस्बिर छापिएको तर, पीडकको तस्बिर नछापिएको जनाइएको छ ।
सञ्चारिका समूहले सञ्चारमाध्यममा महिला हिंसाका समाचार कति आएका छन् ? ती समाचारले कस्तो प्राथमिकता पाइरहेका छन् ? हिंसाका समाचारमा ‘फलोअप’ समाचार आएका छन् कि छैनन् ? समाजमा के कस्ता लैंगिक हिंसा भइरहेका छन् र ती सम्बन्धमा कस्ता समाचार सामग्री आइरहेका छन् भनेर सञ्चार अनुगमन गर्दैआएको समूहकी सचिव बिमला तुम्खेवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख ।
प्रकाशित मिति: २०७२ मंसिर ७ गते साेमवार